Dowladda oo War kasoo saartay duqeyn lala beegsaday Al-shabaab iyo Khasaaro… – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dowladda oo War kasoo saartay duqeyn lala beegsaday Al-shabaab iyo Khasaaro…
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ka hadashay duqeyn diyaaradeed oo Ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ee AFRICOM ka fuliyeen deegaan ka tirsan Gobolka Baay ee Maamulka Koonfur Galbeed.
Qoraal kasoo baxay Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda ayaa waxaa lagu sheegay in dqueynta oo ka dhacday deegaanka Saaxaweyn ee Gobolka Baay lala beegsaday dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab oo halkaas ku sugnaa.
Dowladda ayaa sheegtay in duqeynta lagu dilay 5-xubnood oo ka tirsan Al-shabaab oo ay ku jiray Sarkaal ay ku tilmaamtay inuu ahaa midkii la bartilmaameedsanayay, wallow dowladda aysan shaacin magacyada xubnahaas.
Sidoo kale Dowladda ayaa xustay in uusan jirin wax khasaaro dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dadkii shacabka ahaa ee goobta Agdhawaa, kadib markii iyaga iyo Taliska Ciidamada Mareynanka ee AFRICOM ay sameeyeen baaritaano.
Diyaaradaha Mareykanka ee AFRICOM ayaa 1-dii bishaan duqeyn ka fuliyay deegaanka Kuunyabarow ee Gobolka Shabeellaha Hoose, isla markaana lagu burburiyey Idaacaddii Shabaab ee Al-furqaan ee halkaas ku taallay.
Xog laga helay Kulamo xasaasi oo ka dhacay Xarunta Madaxtooyada iyo Farmaajo…
Diyaarado Ciidamo badan siday oo saaka ka degay Magaalada Baladweyne